पौष मसान्तः ७ अर्बको भुक्तानी, ४५ अर्ब राजश्व संकलन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३१ असार २०७७, बुधबार ११:४४ English
काठमाडौँ, १ माघ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि (पौष मसान्त)सम्ममा सरकाको पुँजीगत खर्च १३.४२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो अवधिमा कुल बजेट खर्च पनि २५.८१ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा पुँजीगत खर्च ५८ अर्ब मात्रै भएको छ भने चालु खर्च ३ खर्ब ९ अर्ब भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत जेठ १५ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजश्वबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पौष समान्तसम्ममा ४ खर्ब ३३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशतमात्रै हो । कर राजश्व ३ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड र गैरकर राजश्व ४१ अर्ब १८ करोड छ ।
एक महिनामा राजश्व संकलन ११ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बजेट खर्च ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । गत मंसिर मसान्तमा सरकारको बजेट खर्च १९.४८ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्च ९.०५ प्रतिशत, चालु खर्च २५.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च ८.४४ प्रतिशत थियो ।
पौष २९ गते एकै दिन ४५ अर्ब राजश्व उठेको छ । पुष २८ गतेसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब राजश्व संकलन गरेकामा पुष २९ गते ४ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधिको अन्तिम दिन पुष २९ गते सरकारले ७ अर्बको भुक्तानी दिएको छ ।
१ माघ २०७६, बुधबार ११:०८ मा प्रकाशित
अन्तर बैंक एटिएम सेवामा अब शुल्क लाग्न सक्ने	३१ असार २०७७, बुधबार १५:२०
सुनको भाउ इतिहासकै उच्च बिन्दुमा, कति छ बजार मूल्य ?	३१ असार २०७७, बुधबार १२:२६
एफएनसीसीआई निर्वाचनमा चन्द्र ढकाल समूहको उम्मेद्वारी घोषणा	३० असार २०७७, मंगलवार १६:१२
घट्यो सुनको भाउ	३० असार २०७७, मंगलवार १३:३५